Waa maxay dhise mareegaha? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Waa maxay dhise mareegaha? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Waa maxay dhise mareegaha? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Haye, champ Waxaan ku aragnaa inaad taas disho ciyaarta ganacsiga yar yar. Waxaad haysataa qorshe ganacsi oo weyn, koox u go'an, iyo sumad leh karti badan. Laakin marka aad wax u socoto, waxaad ogtahay inaad u baahan tahay wax kale: joogitaanka shabakada. Laakiin dhibaato ayaa jirta.
Ma ogtahay dhab ahaan sida loo dhiso website si ay taasi u dhacdo. Haye, waan helnaa. Waxyaabahani waxay noqon karaan kuwo khiyaano leh.
Ma rabtaa inaad gasho sir? Ma aha inay noqdaan!
Isticmaal a martigelin tayo leh iyo dhisaha degelka bilaashka ah waa hab aan walwal lahayn oo lagu helo shabakad xirfad leh oo kor u kacday - Looma baahna khibrad!
Waxaa jira dad badan oo wax dhisayay website-ka, markaa xaggee laga bilaabayaa?
Waa maxay is mareegaha wax dhisa?
Waa maxay faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay leeyihiin website-dhisayaasha?
Maxaad u baahan tahay inaad ka raadiso dhise degel wanaagsan?
Oo sida, dhab ahaan, ma shaqeeyaan?
Waxaan uga jawaabeynaa Qs-kan - iyo kuwa kale -- tusideenna dhammaystiran ee wax walba dhisaha shabakadda. Waxa aad u baahan doontaa in aad ku dhegganaato tan.
Waxaan Helnay Qalabka Naqshadaynta Mareegaha Ugu Sarreysa
Markaad la shuraakoobaan DreamHost, waxaad marin u helaysaa WP Dhisaha Website-ka iyo in ka badan 200+ goobo ganacsi-gaar ah oo bilaash ah!
Waa maxay dhise mareegaha?
Aynu ku bilowno aasaaska.
Dhisaha mareegaha waa madal ama barnaamij kuu ogolaanaya inaad si deg deg ah oo fudud isugu geyso mareegaha. Dhisayaasha goobtan ayaa kaa caawinaya inaad hesho qayb ka mid ah hantida maguurtada ah ee internetka loo habeeyey si aad u bilowdo samaynta joogitaankaaga onlaynka ah, .com gaar ah (ama .wax kastoo) lagu rakibay walxaha summadaada, nuxurka, iyo wax-soo-saarka, oo ku habboon yoolalkaaga ganacsi ee gaarka ah.
Dhisayaasha mareegaha sida caadiga ah waxay wataan sooftiweeraro jiid-iyo-soo-dejin ah oo kuu ogolaanaya inaad habayso walxaha bogga leh qaabayn laga soo doortay sacab muggeed (iyo mararka qaarkood boqollaal) ee hambalyooyinka bogga shabakadda ee la heli karo.
la xiriira: Sidee Websaydhyadu u shaqeeyaan?
Dhisayaasha mareegaha waxay u jiraan qaabab online iyo offline labadaba, farqiga ugu weyn waa isku xirka internetka. Mareegaha internetka wax dhisa uma baahna soo dejin software; Waxay si fudud uga shaqayn doontaa biraawsarkaaga internetka.
Waxa lagu daray?
Waxaad ka shaqayn kartaa wakhti kasta iyo meel kasta (oo leh xidhiidh internet), si aad u dhisto socodka. Inta badan wax-dhisayaasha khadka ayaa la socda adeegyada martigelinta, markaa uma baahnid inaad ka walwasho hoop farsamo dheeri ah. Tani waa ikhtiyaar si fudud loo isticmaali karo kuwa cusub.
Dhanka kale, kuwa wax dhisa ee offline-ka ah waxay u shaqeeyaan sidii barnaamijyo software ah oo la soo dejisan karo, halkaasoo kombuyuutarku uu martigelinayo faylalkaaga ilaa aad diyaar u tahay inaad geliso martigeliyahaaga shabakadda. Doorashadan, waxaad ka shaqayn kartaa goobtaada offline, laakiin tani waxay u baahan doontaa aqoon farsamo oo yar. Waxaa dheer, waxaad u baahan tahay qorshe martigeliyaha shabakadda, kaas oo aad u baahan doonto inaad si gaar ah u iibsato.
Mareegaha wax dhisa ayaa asal ahaan u shaqeeya sidatan:
Maktabadda dhisaha degelkaaga, ka soo qaado qaab-dhismeedka sida ugu habboon ugu habboon baahiyahaaga.
Wax ka beddel qaab-dhismeedka ku dhex-yaalla dhagsi oo ku dar macluumaadkaaga (sida sawirada, muqaalka, badhamada bulshada, iyo qoraalka) si aad shakhsiyayso goobtaada.
Relacionado: Waa maxay dhise mareegaha? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Waa maxay Faa'iidooyinka iyo Khasaarooyinka Dhisayaasha Mareegta?
Haddaba waa ayo kuwa wax dhisa website-ka, si kastaba? Goobahani waa qalab aad u fiican milkiilayaasha ganacsiga yaryar iyo ganacsatada raadinaya inay abuuraan joogitaan online xooggan - si dhakhso ah oo fudud.
Wuxuu ula socdaa dhise goobta saxda ah aad biz yar? Aynu ku samayno xoogaa go'aan qaadashada leh liis wanaagsan 'ol pro/con list.
PRO: Dhisayaasha mareegaha uma baahna codayn ballaaran ama xirfado farsamo.
Aynu wajahno - dhammaanteen ma nihin kuwa kumbiyuutarka ku hadla. Taasina waa caadi. Si aad kor ugu kacdo goobta oo aad ula socoto wax dhisaha mareegaha, uma baahnid inaad noqoto. Haddii aad taqaan sida wax loo riixo, waxaad dhisi kartaa goob kooban oo leh qoraal, sawirro, muuqaalo, iyo qaabayn qurux badan oo laga jaray hiigsiga horumarinta mareegaha DIY-schmancy-ka qurxoon.
Waa run: uma baahnid inaad qorto hal sadar oo kood ah.
PRO: Waa dayactir hooseeya.
Ka fakar kuwa dhisa mareegaha inay yihiin qol-qol si fudud u socda (ma aha kan ku qaata 45 daqiiqo qubeyska). Uma baahna daryeel adag ama ilaalin joogto ah kamana dhigayaan inaad timahaaga soo jiidato. Sababtoo ah habayntooda fudud, uma baahnid inaad ku cadaadiso shabakadaada, taas oo ah a weyn guulayso. Websaydhkaaga ayaa wali u baahan doona inuu ahaado la cusboonaysiiyay nuxur cusub si joogto ah - dhammaan goobaha wanaagsan ayaa sameeya - laakiin kuwa wax dhisa website-yada ayaa taas fududeeya.
PRO: Dhisayaasha mareegaha ayaa u dejinaya goobtaada si degdeg ah.
Sida mulkiilaha ganacsi yar, waxaad leedahay wax badan oo la sameeyo oo aan waqti badan lahayn. Badbaadso saacadahaaga qaaliga ah adiga oo isticmaalaya mareegaha wax dhisa si aad u fududayso habka abuurista mareegta. Muddo daqiiqado ah gudahood, waxaad ka abuuri kartaa degelkaaga gaarka ah ururinta qaabab hore loo qaabeeyey oo indho-qabad leh oo lagu rakibay nuxurka astaantaada, sawirrada, iyo fiidyaha.
PRO: Ikhtiyaarada, fursadaha, fursadaha.
Ma ka werwersantahay inaad ku dhegganaato goob-cutter-cutter oo u eeg .com kasta oo kale? Ha samayn
Dhisaha mareegaha wanaagsan wuxuu kaa caawinayaa inaad ka dhex muuqato dadka. Iyada oo leh maktabad buuxda oo xulasho ah, qaabayn la hagaajiyay, walxaha naqshadaynta soo jiidashada iyo isticmaale-saaxiibtinimada leh, iyo ikhtiyaarka habaynta, waxaad ka dhigi kartaa goobtaada mid ka mid ah noocyada.
PRO: Uma baahnid inaad noqoto garaaf naqshadeeye.
Markaa waxaa laga yaabaa inaadan taageere u ahayn farshaxanka dugsiga - dhib malahan. Uma baahnid inaad fahanto aragtida midabka, waxay leeyihiin xirfado Photoshopping, ama noqo aqoon u leh qoraalka si loo abuuro degel soo jiidasho leh.
Dhisayaasha mareegaha waxay sameeyaan kor u qaadis culus iyagoo siinaya naqshado hore loo sii baakadeeyay oo u muuqda mid fiiqan. Waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan xorriyadda is-beddelka, si aad u siiso goobtaada taabasho shakhsi ahaaneed oo ku dhex jirta template si xirfad leh loo qaabeeyey.
CON: Web-dhisayaasha waxa laga yaabaa inay xaddidaan horumariyeyaal khibrad badan leh.
Haddii aad leedahay qaar ka mid ah aqoonta farsamada, waxaa laga yaabaa inaad rabto xoriyad dheeraad ah marka aad habaynayso goobtaada waxaana laga yaabaa inaad u heellan tahay inaad ku dhejiso gambaleelka iyo foorida horumarsan ee aan lagu siin kuwa wax dhisa boggaga.
Haddii aad raadinayso ikhtiyaarka ugu sarreeya, shaqaaleysiinta naqshadeeyaha shabakadda ama dhisitaanka degel DIY oo salka hoose laga soo bilaabo waxay noqon kartaa mid qiimo leh. Intaa waxaa dheer, dhisaha goobta, mar walba ma aad gacanta ku hayso koodka maamula boggagaaga.
PRO: Way ku fudud yihiin jeebka
Kor u qaadida goob shaqaynaysa (iyo qurux badan). macnaheedu maaha in bangiga la jabiyo. Rumayso! Iyada oo leh xilliyada tijaabada dhisaha goobta iyo xulashooyin badan oo qiimo jaban (xitaa akoonka bilaashka ah), waxaad ku badbaadin kartaa dinaar qurux badan kharashyada kale ee yar yar.
CON: Dhisayaashu waxay yeelan karaan bogag ama shaqooyin xaddidan.
Adeegso dhise shabakad ku habboon miisaaniyad oo wad halista xaddididda qaab-dhismeedka boggaaga. Sababtoo ah waxaad hoos timaadaa shuruucda barnaamijkaaga, waxaa laga yaabaa inay xaddidaan tirada boggaga ay boggu yeelan karto, ku bixiyaan dhowr ikhtiyaar oo ganacsi e-commerce ah, ama la'aanta awoodaha wax-ka-qabashada.
Haddii aad leedahay qorshayaal waaweyn oo qaab-dhismeedka bogga ballaadhan, waxaad u baahan doontaa inaad si taxadar leh u baadho bixiyeyaasha si aad u hubiso inaad hesho ciyaarta ugu fiican yoolalkaaga muddada-dheer.
Maxaad u baahan tahay inaad ka raadiso dhisaha mareegaha?
Way caddahay: Dhammaan kuwa wax dhisa goobta looma wada abuurin si siman. Haddaba maxaa ka sooca wax-dhisaha kan weyn? Maxaa la gudboon aad raadi markaad mid dooranayso? Tixgeli liiskan waxyaabaha laga rabo.
1. Adeegsiga Fudud
Waxa aad dooratay in aad u isticmaasho dhise mareegaha si ay u fududaato isticmaalkeeda, markaa ha ku dhegin mid u baahan Ph.D. (ama xataa xirfadaha codaynta sare) si loo shaqeeyo. Raadso is-dhexgal fudud, saaxiibtinimo-saaxiibtinimo leh kaas oo kuu ogolaanaya inaad si fudud u dhisto mareegaha - iyadoon loo eegin khibradaada dhisidda mareegaha. Ka bood qalooca waxbarashada oo billow dhisidda degel qurux badan isla markiiba.
2. Qaababka Tayada Sare
Dhegaystayaashaadu waxay meel mayl u jirta ku arki karaan degel muuqaal jaban. Dooro dhise mareegaha tayada sare leh, moodallo u eg xirfadle kuwaas oo nadiif ah oo soo jiidasho leh. Tani waa fursadaada aad ku samayn karto aragti hore oo xoogan, markaa iska ilaali kuwa wax dhisa website-yada iyada oo la'aanta xulashooyinka heerka koowaad.
3. Cusbooneysiin degdeg ah
Ma maqashay? Dulucda waa boqor. Mareegahaagu wuxuu u baahan yahay xog heersare ah, si joogto ah loo daabaco, loo cusboonaysiiyo, oo loo wadaago si loo sameeyo (loona ilaaliyo) gaadiidka ku imanaya astaantaada. Hubi in dhisaha goobtaada uu fududeeyo in lagu daro oo la beddelo waxa ku jira boggaaga.
4. Waafaqid bulsho
Xaaladda ugu fiicani waa in dhagaystayaashu kugula xiriiraan habab ka badan hal. Dhisaha goobtaada waa inuu kuu oggolaadaa inaad ku xidho oo aad muujiso astaanta warbaahinta bulshada si ay u caawiso booqdayaasha - hadday yihiin Instagrammers ama tweeters - inay kula sii socdaan. Hubi in wax kasta oo wax dhisaha ah ee aad doorato in uu si aan kala go 'lahayn u dhexgelin karo barahaaga bulsho.
5. Domain iyo Email Options
Iyada oo lala kaashanayo martigeliyahaaga mareegaha, waxaad u baahan doontaa inaad lahaato qaybtaada hantida internetka - oo macnaheedu yahay a domain iyo ciwaanka iimaylka sumadeysan. Cutubyadani waa muhiim marka la isku dayayo in la sameeyo sumad lagu kalsoonaan karo gudaha goobtaada. Dooro dhise goobta bixiya fursadaha domains iyo diiwaangelinta iimaylka.
Soo-booqdayaashaadu waxay u baahan doonaan habab sahlan (oo cad) oo ay kula xidhiidhaan oo ay kula soo xidhiidhaan - hadday tahay inay soo gudbiyaan ashtako, su'aalo, ama bogaadin (waxaan rajaynaynaa inay ka badan tahay tan dambe). Hubi in dhisaha degelkaaga uu leeyahay agabka uu ku shaqeeyo samee foomamka dhagaystayaashu si sahal ah ayay u socon karaan.
7. Ikhtiyaarada Habaynta
Xataa iyadoo leh qaab qaabaysan, waxaad rabtaa inaad awood u yeelatid inaad siiso goobtaada a xoogaa dhadhanka aan la garan karin ee astaantaada. A+ dhisaha mareegaha waa inuu bixiyaa xoriyada aad ku dari karto taabashadaada gaarka ah iyo xulashooyinka habaynta, sida xarfaha kala duwan, qaababka qoraalka, ama nidaamyada midabka. Adigu adiga.
Maxaad U Baahan Tahay Si Aad Ugu Bilawdo Dhisiyaha Mareegta?
OK, hadda aynu hoos ugu dhaadhacno nitty-gritty ee isticmaalka mareegaha wax dhisaha. Waxyaabaha ugu horreeya marka hore, maxaad u baahan tahay? Halkan waxaa ah liis hubineed oo anfacaya si aad u bilowdo.
1. Dooro website-kaaga dhisaha.
Drumroll, fadlan! Waa markii aan dhammaanteen sugeynay: doorashada goobtaada dhismaha goobta iyo bilaabista samee website-kaas mid-nooc ah.
Weli ishaada ma saartaa dhise degel gaar ah? Waxaan helnay Dhismaha Mareegta WP, qalab qaali ah oo loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad dhisto goob qurux badan oo shaqaynaysa WordPress - looma baahna aqoon farsamo.
2. Hel domain.
Tani waa hawl aasaasi ah oo la sameeyo laakiin oh-aad-muhiim u ah. Sidaan ka wada hadalnay, barta internatkaagu waa meesha aad ka samaysato joogitaanka ganacsigaaga mareegaha. Si aad u samaysato domain adiga kuu gaar ah, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho diiwangeliyaha - tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad iibsatid oo aad diiwaangeliso magacaaga domain, adoo ilaalinaya ciwaankaaga gaarka ah. BTW, waad haysan kartaa domain iyo web hosting hal saqafka hoostiisa.
3. Hubi martigeliyaha Mareegta.
Ma aha oo kaliya inaad u baahan tahay cinwaan shabakad gaar ah, laakiin waxaad u baahan tahay adeeg si aad u dejiso goobtaada - AKA, martigeliyaha shabakadda. WP Website Builder ayaa lagu daray annaga Qorshayaasha martigelinta WordPress, taasoo la macno ah inaad xamili karto martigelinta iyo naqshadeynta goobta hal mar.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad raacdo goob kale, waxaad u baahan doontaa inaad ka iibsato qorshe martigelinaya bixiyaha martigelinta. Si fudud loo dhigo, martigeliyaha websaydhku wuxuu helayaa goobtaada internetka; waxaad bixinaysaa si aad u kaydsato mareegahaaga server-kooda.
Relacionado: Sida loo doorto Bixiyaha Martigelinta Shabakadda: Liis hubinta 15-dhibcood ah
4. Waxaad haysataa (e) mail.
Waa caqli-gal - muhim ah, xitaa - in samee ciwaan email ah ku xiran ganacsigaaga. Haddii aad u socoto dariiqa mareegaha iskeed isu martigeliso, inta badan waxaad helaysaa faa'iidada iimaylka sumadeysan, sida you@yoursite.com. Qabow, haa?
Waxaa dheer, noocyadan cinwaannada iimaylka ah waxay u muuqdaan kuwo ku-suud iyo-xidhe badan marka loo eego bixiyayaasha iimaylka caadiga ah, kor u qaadaya kalsoonida iyo kalsoonida booqdayaashaada.
5. Abuur oo habee.
Tani waa qaybta madadaalada. Sahami maktabadda dhisyaha degelkaaga qaab-dhismeedka iyo qaab-dhismeed kasta walxaha gaarka ah, qorshaynaya taas oo sida ugu wanaagsan ugu adeegi karta ujeeddada ganacsigaaga - iyo dhegaystayaashaada. Dabadeed, u habbee soo bandhig codka astaantaada gaarka ah. Ku ciyaar midabyo, xarfaha, asalka, meelaynta qoraalka, walxaha aragga, iyo in ka badan. Ka dhig mid adiga kuu gaar ah.
6. Ku dar Sawirada, Logos, iwm.
Sii goobtaada wax badan oomph leh sawirro tayo sare leh iyo muuqaalo calaamad u gaar ah oo dhidibada u taagay ganacsigaaga soona jiidanaya booqdayaasha (tilmaan: waxay jeclahay muuqaallo). Waa kaas. Hadda goobtaadu waxay bilaabaysaa inay eegto run ahaantii dhuuqsanaan.
Qoraal ku sawiran: Ku muuqaalada ka dhig mid kuu shaqeeya, waxaad u baahan tahay sawir qaade fiiqan iyo naqshad dilaa ah. Scour goobaha sawirka royalty-free, sida Pixabay, Pexels, ama Unsplash sawirada soo jiidashada leh (kaliya dheh maya si aad u been abuurto, sawiro farmaajo leh), shaqaaleysiiso sawir qaade, ama isticmaal talooyinkan si aad u qaadato sawiradaada ganacsigaaga.
Relacionado: Sida Loo Nakhshadeeyo Summada Mareegahaaga oo Booqdayaasha ay Jeclaan doonaan
7. Samee falanqaynta.
Milkiile ganacsi yar ahaan, waxaad u baahan tahay Google - sababo badan dartood. Mid waa in (rajo) la sugo meel bannaan oo la jecel yahay ee matoorada raadinta. Sababta kale ayaa ah raadinta mitirka. Geli Google Analytics. Adeegani wuxuu kaa caawin karaa inaad la socoto tirooyinka iyo falanqaynta fikradaha qiimaha leh si ay kaaga caawiso inaad sii wadid hagaajinta goobtaada. Mahadsanid, G.
Relacionado: 20 Metrics Qof kasta oo Blogger ah ayaa u baahan inuu la socdo si uu u cabbiro guusha
Si aad u tagto, adiga! Waxaad heshay goob cusub oo caan ah. Haddii aadan wali helin goobta kugu habboon, sii akhri.
WP Website Builder: Hordhac iyo Taariikh
Hagaag, waanu tuuraynaa tilmaamo in muddo ah. . . ma sheegi kartaa? Haddaysan ahayn, waa kan ogaysiisteenna u eg megaphone. DreamHost, waxaad ku dhalin kartaa heshiiska xirmada: qorshe martigelin WordPress oo qiimo jaban leh oo marin u hel dhisaha goobtayada oo aan caadi ahayn, Dhismaha Mareegta WP.
Haa, si sax ah ayaad u akhriday. Waxaa ka mid ah adeegyadayada kor ku xusan iyo kuwa ka dambeeya ee dhisaha, oo ay la socdaan domain, iimaylka, iyo xulashooyinka martigelinta shabakada adag.
Sug - aan dib u soo celino ilaa hal daqiiqo. Sidee buu ku yimid dhisaha goobtayada?
Dhismaha Mareegta WP waxa uu ka dhashay baahi la ogaaday. Mar mar, waxaan ogaanay in isticmaalayaashu ay rabeen qayb ka mid ah hantida maguurtada ah ee internetka laakiin midkoodna ma garanayaan sida loo bilaabo ama ma haystaan ​​wakhti ay ku sameeyaan degel meel eber ah.
Sidaa darteed, aaladda dhismaha goobtayada - sanduuqa furitaanka ee hal-abuurayaasha iyo aragti-yahannada (sida adiga oo kale!) Rabitaanka inay wax u kacaan oo dhaqso u socdaan - ayaa dhashay! Waxaa xoojiya saaxiibadayada BoldGrid, WP Website Builder waa qalab hal-abuureed oo hal-joojin ah oo ku habboon dhisidda goob qurux badan iyada oo aan dhib iyo ballan-qaadyo lahayn.
Relacionado: Immisa ayay ku kacaysaa in la dhiso degelkaaga?
Tilmaamaha Muhiimka ah ee Dhisaha Mareegta WP
Markaa aynu ka hadalno dukaanka: maxaad u isticmaalaysaa our dhisaha goobta? Maxay ku siinaysaa?
WP Web Builder waa dhise shabakad casri ah oo saaxiibtinimo ku leh kaas oo ku siinaya xakameyn iyo habayn farahaada. Tani waa goobtaada, ka dib oo dhan.
Iyada oo ay weheliso xidhmo fudud oo si fudud loo isticmaali karo plugins WordPress ah iyo aaladaha naqshadaynta ee ay sameeyeen dadka BoldGrid, WP Website Builder waxa uu ka dhigayaa in la helo goob shaqaynaysa oo soo jiidasho leh oo fududaysa.
Intaa waxaa dheer, WP Web Builder wuxuu sameeyaa dhismo goob sidoo, samaynta habka abuurista mid fudud laga bilaabo bog madhan ilaa daabacaad. Plus, Waxyaabaha bilawga ah waxaa lagu soo ururiyey naqshad kasta oo qurux badan, jawaab celin leh, oo la beddeli karo, taasoo sahlaysa in la helo goob aad u qurux badan, looma baahna khibrad kood sare leh.
Iyo mar haddii WP Web Builder loo dhisay WordPress-ka ugu caansan adduunka nidaamka maamulka content - waad ogtahay inay fududahay inaad cabirto goobtaada oo aad ku darto shaqeynta goorta iyo haddii aad u baahan tahay (mareegaha ecommerce, qof?).
Relacionado: Sida Loo Dhiso Bakhaar khadka tooska ah oo Cajiib ah oo wata Mawduuca OceanWP
WP Dhisaha Mareegta Talaabo-tallaabo
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaad dooratay adeeggayaga xiddigaha. Aan ku dhex marno sida loo dhiso goobtaada dhisaha goobtaada. Si aad u bilowdo, waxaad u baahan doontaa inaad doorato Dhismaha Mareegta WP ikhtiyaar ahaan inta lagu jiro iibsashada DreamHost. Fiiri fiidiyowga kore si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan habka hubinta.
1. Fur saaxir wax-dhisaha mareegaha WP.
Marka aad nala samaysato degel cusub, waxa aad heli doontaa iimayl ay ku jiraan aqoonsiga gelitaanka WordPress iyo macluumaad ku saabsan sida loo bilaabo. Mid ka mid ah xulashooyinka waa in la isticmaalo WP Website Builder setup wizard. Saaxirkan ayaa ku dhex socda adiga oo dooranaya naqshadaynta degelkaaga, dejinaya boggaga aasaasiga ah, ku daraya macluumaadka muhiimka ah, iyo gelitaanka dashboardka WordPress.
2. Dooro mawduucaaga.
Marka xigta, aan doorano template design (sidoo kale loo yaqaan a Mawduuca WordPress) goobtaada cusub!
Dhinaca bidix ee shaashadda, dooro qayb nooca goobta aad rabto inaad abuurto si aad u aragto dhammaan mawduucyada la heli karo. Ka dul rog mawduuca aad dooratay, ka dibna dhagsii Dooro Badhanka.
Xusuusnow, mawduuca aad dooratay maaha inuu noqdo mid sax ah marxaladan. Ka dib, waxaad awoodi doontaa inaad wax ka beddesho mawduuc kasta oo aad doorato si aad uga dhigto mid ku habboon astaantaada 100%.
Relacionado: Sida loo doorto Qaabka Website-ka ugu Wanaagsan ee Boggaga
3. Ku dar macluumaadka xiriirka.
Hadda waa waqtigii lagu dari lahaa xiriir fudud iyo macluumaadka warbaahinta bulshada. WP Web Builder wuxuu isticmaalaa macluumaadkan si uu kuugu dejiyo wadaaga warbaahinta bulshada, laakiin sidoo kale waxaad ka boodi kartaa tallaabadan haddii aadan xiisaynaynin.
4. dhame oo ku rakib.
Markaad diyaar noqoto, dhagsii dhame oo ku rakib badhanka. Inta aad sugayso saaxir-yaqaanka degdega ah si uu wax walba u dejiyo, xor u noqo inaad qaadato nasasho aad u qalma. Sida ugu dhakhsaha badan mareegtaadu diyaar tahay, waxaad heli doontaa dashboardka WordPress. Kahor intaadan wax kale samayn, eeg boggaga guriga.
4. Mawduucaaga wax ka beddel.
Halkaa marka ay marayso, waxa ay u badantahay in aad rabto in aad wax ka badasho mawduucaaga. Si taas loo sameeyo, ku soo celi dashboard-ka oo fur tafatiraha bogga aad rabto inaad bedesho.
Markaad gudaha gasho, waxaad ogaan doontaa inaan kuu samaynay Boost iyo Page Builder cusub, kaas oo bedelaya tafatiraha Block WordPress ee caadiga ahaa. Sifadan, waxaad ku dhaqaajin kartaa curiyayaasha (ama blocks) waxyaabaha ku jira mouse-kaaga oo waxaad geli kartaa habaynta habaynta degdega ah adigoo gujin kaliya.
Hadda waa markaaga inaad isku daydo dhisaha Website-ka WP. Anaga oo isku darsanay xulashada mawduuca iyo dhise-jiid-iyo-dhis, waxaanu samaynay qaabaynta degel qurux badan mid fudud. Ballan qaad!
Dhismaha Mareegta, La Sharaxay
Haddii aad u baahan tahay inaad rakibto WordPress, dooro template design, ama aad dhisto degel khaas ah, waan ku caawin karnaa! Isdiiwaangeli si aad u hesho maqaalkeena bishiiba mar si aadan maqaal uga maqnaan.
Riixitaanka u dambeeya
Haddii aadan horay u aqbalin, ka fiirso tan mar kale: Adiga u baahan website weyn. Dunidu waa online, ganacsigaaguna waa inuu sidoo kale ahaado.
Marka dhageystayaasha shabakadu ay u socdaan goobtaada, waa inay helaan goob shabakadeed xirfad leh oo shaqaynaysa. Dhisaha degelku wuxuu kaa caawinayaa inaad taas si dhakhso ah oo fudud u sameyso, oo ku haynta martigelintaada iyo abuurista goobtaada hal saqaf ayaa ka dhigaysa xitaa mid fudud.
Dhismaha Mareegta WP waxay kaa caawin kartaa inaad ka dhigto goobtaada sida ugu wanaagsan ee ay noqon karto - iyadoo la adeegsanayo dhowr dhagsi oo fudud.
Qorshe 5-talaabo ah oo loogu talagalay Soo saarista iyo Qaybinta Fiidiyowga
Sida loola socdo taraafikada wax iibsiga ee bilaashka ah ee dusha sare ee Google oo dhan [Muuqaal]